———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အိပ်ကြွေးတင်တယ်လို့ပြောရင် ဘာကိုဆိုလိုသလဲလို့ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေပြီလား။ ဥပမာ-လူတစ်ယောက်က ပထမတစ်ရက်မှာ ၅ နာရီပဲ အိပ်ခဲ့ရတယ်၊ နောက်တစ်ရက် ၃နာရီပဲ အိပ်လိုက်ရတယ်။ နှစ်ရက်ပေါင်းမှ ၈ နာရီပဲ အိပ်ရသေးတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာရင် ပြန်အိပ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။...
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— သဘာဝအစားအသောက် အများစုကို ညဘက်မှာစားပေးတာကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျစေပြီး ပြည့်ပြည့်၀၀ အနားရစေပါတယ်။ သစ်ကြားသီး သစ်ကြားသီးမှာ အိပ်ရေးဝစေမယ့် အမိုင်နိုအက်စစ် ထရစ်ပတိုဖန်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝနရီ ဟန်ချက်ညီစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်နဲ့ မယ်လတိုနင်ဟော်မုန်းတွေကို အထွက်များစေပါတယ်။ တက်ဆက်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ...
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်တော်ဝချင်ပါတယ်။ အအိပ်အစားမမှန်လို့များလား မသိဘူး။ ပိန်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုနေထိုင်ရင် ၀လာနိုင်ပါသလဲခင်ဗျ။ A. ၀ချင်ရင် အစားအသောက်ကို ၀အောင်စားဖို့ လိုပါတယ်။ အဓိကကတော့ ထမင်းနဲ့ အဆီအအိမ့်စာတွေ များများစားရင်...
တစ်နေ့ရှစ်နာရီခန့် အိပ်စက်ပေးရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမှာလဲ . . .
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်နေ့မှာ အချိန်ရှစ်နာရီခန့် ပုံမှန်အိပ်စက်ပေးတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ရင် စိတ်ပိုင်း၊ ခံစားမှုပိုင်းနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာဆိုရင် လူ ၁၀၀...
၇ နာရီ = အိပ်စက်မှုအတွက် လိုအပ်ချိန်
အရွယ်ရောက်သူတွေအနက် တစ်နေ့မှာ အချိန်ခုနစ်နာရီထက် လျော့နည်းပြီး အိပ်စက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေ(တစ်ရေးအိပ်ချိန်အပါအ၀င်)ဟာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါအန္တရာယ် မြင့်မားတယ်လို့ အနောက်ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ် လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောရောဂါဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ သေဆုံးနှုန်းအများဆုံးရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်စက်အနားယူချိန် တိုတောင်းလွန်းတာကြောင့် နှလုံးကြွက်သားရောဂါကြောင့် နှလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ သွေးတွေကို နှလုံးသွေးကြောတွေက မဖြည့်ဆီးပေးနိုင်တဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို...
သင့်ကို ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်း ဖြစ်စေသည့် အံ့ဖွယ်အကြောင်းရင်း ခြောက်ရပ်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဘာကြောင့် အိပ်မပျော်တာလဲဆိုတာကို အကြောင်းရှာမရတဲ့သူတွေအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေရှိချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပူလွန်းသောခေါင်းအုံး အေးမြတဲ့ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ ခေါင်းချပြီး အိပ်စက်နားနေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို လျော့ကျစေပြီး အိပ်ငိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စဘာ့ဂ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အေးမြတဲ့ခေါင်းအုံးနဲ့...
မယ်လတိုနင်အဆင့်နည်းပြီး ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်းအတွက် အိမ်တွင်းကုထုံး
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— မယ်လတိုနင်ဆိုတာ ဦးနှောက်ထဲက ပိုင်နီရယ်ဂလင်းကနေထုတ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးပါ။ ဒီဟော်မုန်းရဲ့  အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာက အိပ်-နိုး စက်ဝန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး ညဘက်မှာ ပြည့်ပြည့်၀၀ အနားရအောင်နဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနိုးထအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာပဲ ပိုင်နီရယ်ဂလင်းကနေထုတ်တဲ့...
အိပ်ရာစောစောဝင်တာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘာကြောင့်ပိုကောင်းစေတာလဲ . . .
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် တစ်ညမှာ အိပ်ချိန် ခုနစ်-ရှစ်နာရီလောက် အိပ်စက်သင့်တယ်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီလိုကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကို ပိုပြီးအာနိသင်ရအောင် ညစဉ် စောစောအိပ်ရာဝင်ပေးပါက ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေတာ၊ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေတာ၊ အလုပ်ထဲမှာ စွမ်းအားကောင်းစေတာနဲ့ တခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိစေပါတယ်။ (၁) ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေပါတယ်...